Odeeffannoo Walga’ii PP Tibbanaa! Karoora PP Waliigalaa. – Kichuu
Karoora PP Waliigalaa
Torban Darbe PP’n Guutuu Oromiyaa Walgahii Sadarkaa Godinaati ta’aa turte xumurtee jirti.
Agandicha irrati Gamaggama hoji erga gaggeessitee booda Karooraa fi Kallattii armaan gadi baafatee erga deebitee boodaa ammas Sadarkaa Aanaati erga irrati mari’attee booda Gandaa Baadiyyaa hundaatti hoji irra oolchuuf hojiitti bobbaatee jirti.
Karoorichi Maal ture?
1.Gibira galii mootummaa kan Waliigalaa Amajji 30/5/2013 xumuruu.
2.Duula filannoo marsaa 6ffaa gaggeessuuf caasaa Uummataa keessaa Taajjabdootaa fi bakka bu’oota filannoo kan ta’an namoota amanamoo Uummata keessaa,Dubartootaa keessaa,dargaggoota keessaa fi Abbooti amantaa keessaa dursanii akka qopheeffamani maqaa isaanii Unka guutanii Aanaa galchani leenjiif akka qopha’an gochu.
3.Sakata’iinsaa ABO shanee fi deggertoota isaani dhabamsiisuun filannoo asitti nagaa fi tasgabbii haarawwaa buusuun filannoof haala mijeessuu.
4.Ijaarsaa Qaamolee humna Nageenyaa sadarkaa hundaatti cimsuuf Milishaa,Police fi humna haaraa leenjitiif galmeessuu fi jajjabeessuu
5.Filannoo bara 2013tii kanati namoota Gufuu(hard-core)ta’an Data fi Ratio isaani adda baasuun eenyutu filannoo kanatti danqaa nutti ta’a ykn eenyutu filannoo kana nu milkeessa jechuun Qoratani addaa baasuun kallati furmaataa kaa’uu.
6.Kallaati kaaminiyyuu haata’u fedhaanis ta’e dirqamaanis haata’u namni hunduu miseensaa PP haaraa ta’ee akka galmaa’uu gochuu.Keessatu hojjetaa mootummaa fi Daldaaltootaa dirqamaan miseensummaa guuchisuu.
7.Namoota dhaabbilee mormitootaaf Taajjabaa,bakka bu’aa fi kaadhimama ta’u jedhani shakkan Qoratani hidhuu,,Dadhabsiisuu fi ajjeessuu irrati cimsani hojjetaa jiru.
Jaal Diimaa Jaarsoo
#Jabinni WBO diinaaf yaaddoo ta’uu fi firatti abdii horuu isaa ragaan kunooti.
#Waraanni Bilisummaa Oromoo WBOn yeroo kamiyyuu caalaa goleewwan Oromiyaa maratti diina hulluuqqee dhorkuun diinatti yaaddoo uwwisaa, firatti ammoo ijaarsa galma dhugaa mul’isaa jira.
Kun lamaanuu waan tolaan milkaayaa jiru osoo hin taane lolaani. Lolli bilisummaa wareegama gurguddaa haga gatii lubbuu nama gaafatti. Waraanni bilisummaa Oromoos aarsaa ulfaataa akkasii baasuun deemsa gara galma walabummaa Oromiyaa jabeessee itti fufeera.
=>Diinni, ®Marroon du’eera ®Sanyiitu nu lolchiisaa jira jettee boossi. #Marroonis ta’ee #Sanyiin hin duune, hin du’anis. Hoogganoonni kun har’a sirna hin diigamne fi siidaa seenaa onnee miliyootaa keessatti sabni ijaarrate ta’aniiru. Booddessitoonni (Naf*anyaa fi baandaan ishee) har’as milkii fi injifannoo WBO haaluu fi ukkaamsuuf yaalanis osuma itti hadhaa’uu dirqamanii dubbataa jiru. Kaleessa WBO barbadeessineerra jedhanii dibbee dhaanaa turani. Har’a garuu dandeettii fi injifannoo WBOn itti jiru ofumaan bulgaafataa jirti.
#Qawwee caccabaa ittiin kaleessa nu xiqqeessuuf yaalantu har’a:-
~Meeshaalee ammayyaa waraana PP irraa gaafa booji’u,
~Waraana xoophiyaas booji’u,
~Sochii lafoo irraa gara konkolaataa mootummaarraa booji’een sosso’u
~Finfinnee (Buraayyuu) seenu
~Caasaa mootummaa diigu
~Ummata isaa barsiisu fi hidhachiisu
~Lola riphee loltummaa irraa haga lola dhaabbataa (Conventional war) seenee jiru.
fi kkf tti jiru ummata qaamaaf qalbiin dhugaa jirtu beeku fi hawaasa addunyaa sobaa turan gaafa dubbiin itti jajjabaattu muddamanii dubbachuun oolaaree?
Siyyum Tashoomee waan inni fb irratti barreessaa fi haasawaa taasisaa ture walumaan argaa turre. Har’ammoo Kan inni jechaa jiru kunooti Viidiyoo armaan gadii kana daawwadhaa!!
=>Hanguma Fiinxaaleyyiin Amaaraa dubbatan illee baandaan jaraa garuu hin sokoksine. Akkuma sobaan jiraatte ammas sobdee bubbuluu feeti.
Barri sobaan saba sobanii/sossobanii jiraatan kana booda hin jiru.
®WBOn wabii sabaa haa waaru!!
1. Waraanni kaaba itti fufe
– Loltoonni Eritiraa nama 52 ajeesanii
– Loltoonni Eritiraa naannoo Akusumitti rukutaman
2. Olmaa Oromiyaa
-Jawaar faa boru mana murtitti dhiyaatu
– Gamoon 322 abbaa hin qabu jedhame kan warra Amaarati jedhame
– waldidaan PP Oromiyaa fi Amaara hammate
– Bunni hin jiru?
– Teleen qarshii biliyeena wadhakkaa Abiyi kenne
– Manni murtii federaala Finfinnee akka nannootti ilaalun gaafi uume
3. Hajajaan waraana Somalee kan geggeesa ture Jeneral Mahamad Nur Galal ajeefaman
– Loltoonni Itoophiyaa Baldawinitti ajeefaman
– Suudan Sudi Arabiyaa akka Itophiyaan araarsitu gaafatte
Oromoo hidhaa fi ajjeesaa Manaa erraattii gubaa deeggarsa Ummata Oromootiin barbaada jechuun tuffiidha.